पतन भयो ओलीतन्त्र तर, अबको बाटो के हो ?
scheduleमगलवारबैशाख ७ गते, २०७८
३ वर्ष लामो ओलीतन्त्रको बितेका ३ महिना पराकाष्ठाको अवधि थियो । पुस ५ गतेको ओली–प्रगितमनमाथि फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलासँगै अन्ततः ओलीतन्त्रको पतन भएको छ । औपचारिक पतनका लागि अझै केही दिन लाग्न सक्दछ तर नैतिक तथा राजनीतिक पतन भने प्रष्ट भइसकेको छ ।
चरम संघर्षका अवस्थामा भावनात्मक आवेग प्रखर हुनु मानवीय गुण हो । मानिस भावना र विवेकको संयोजन भएको प्राणी हो । ओलीतन्त्र विरुद्धको संघर्षका क्रममा जेजस्ता आरोपप्रत्यारोप भए, ती मूलतः भावना प्रधान कुरा थिए । अबको आवश्यकता भावना हैन, विवेकको हो ।
ओलीतन्त्रसंगै हाम्रो लोकतान्त्रिक अपेक्षा कहाँनेरबाट खण्डित भएको थियो ? ओलीतन्त्रमा हामीले कसरी लोकतान्त्रिक हानीनोक्सानी (डेमोक्र्याटिक डिफिसिट) सामना गर्दै थियौं, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ‘कोर्स’ कहाँनेर आइपुग्यो, अबको बाटो कसरी विवेकसम्मत बनाउने ? यी प्रश्न अब अहम् महत्वका हुनेछन् ।
ओलीतन्त्रको पतनलाई रिस, आवेश, कुन्ठा, प्रतिशोध र तुष्टिकरणका आधारमा हैन, वस्तुगत ऐतिहासिक अपरिहार्यतासँग जोडेर बुझ्नु पर्दछ । वि.स. १९९० यता हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन करिब ८० वर्षको भयो । यो ८ दशक लामो संघर्ष र बलिदानका अपेक्षाहरू कुनै खेलाची थिएनन् । तर यो अपेक्षा विपरित हाम्रो लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा पर्ने गर्‍यो ।
राणा, शाह, पञ्चजस्ता ‘मण्डलेतन्त्र’ आधारित शासनहरू मात्र हैन, लोकतान्त्रिक दलहरूभित्रै उत्पन्न हुने हठी र अति महत्वाकांक्षी नेतृत्वहरूको ‘नवमण्डलेतन्त्र’ समेत लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै हानिकारक हो । ओलीतन्त्र हेर्दाहेर्दै आश्चर्यजनक ढंगले ‘नवमण्डलेतन्त्र’ को नयाँ संस्करणका रुपमा उदित भएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र अपेक्षाहरू यावतरुपमा खण्डित भएका थिए । यदि ओलीतन्त्र सफल हुन्थ्यो त सायद हामी हुन सेनको कम्बोडिया वा पुटिनको रुसजस्तो अवस्थामा हुने थियौं ।
ओलीतन्त्रलाई जे जति साथीहरूले यो बीचमा साथ दिए, उनीहरूले पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । सनक र लहडका भरका कुनै गम्भीर विश्लेषण र मूल्यमान्यता विनाको राजनीतिक कोर्समा हिंड्दा अन्ततः समस्या आफैमाथि आइपर्दछ । ज्ञानेन्द्र शाहले त्यस्तै मुर्खतापूर्ण काम गरेका थिए । उनको मुर्खताकै कारणले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि अन्त्य भएको थियो ।
यति निकट भबिष्यको यति तरोताजा उदाहरण आँखा सामुन्ने हुँदाहुँदै प्रम ओली र राप भण्डारीले यो स्तरको दुस्साहस गर्नु हुन्थेन । अब सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्वयं ओली र भण्डारीमाथि छ । संगसंगै त्यो गुटमा लागेका केही मूल नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि छ ।
नैतिक आधारमा भन्ने हो भने यतिखेरसम्म ओली र भण्डारीले आआफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसक्नु पर्ने हो । नेपालमा नैतिक मापदण्डमा आधारित राजनीतिक संस्कार त्यसै पनि दुर्लभ छ । त्यसमाथि ओलीतन्त्रका समर्थकहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक हुन्छ । तर, दुई चार दिन राजीनामा नगर्दैमा ओली समूहका संकटहरू दुर हुनेवाला छैनन् । संसद अधिवेशन शुरुवात भएसंगै ओलीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने नै छ ।
ओली समूहको सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले गुटको वैधानिकता हो । फाल्गुन ११ को फैसलापछि सम्भवत ओली समूहमा लागेकाहरूले राजनीतिक पुनर्विचार गर्न थालेको हुनु पर्दछ । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउन ओलीका लागि अब त्यति सहज हुने छैन । त्यसो भएमा संसदको बाँकी कार्यकालमा ओलीको पार्टी वैधानिक अस्तित्वमा नै नरहन सक्दछ । ओलीका लागि २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको संसद सदस्यको ‘जागिर’ ४० प्रतिशत नेकपा सांसदले सजिलै छोड्लान् भनेर मान्न सकिन्न ।
अबको पहिलो प्रश्न नेकपाको वैधानिकता प्रष्ट हुनु नै हो । यो प्रश्न हल नहुन्जेलसम्म पुनःस्थापित संसदभित्र को सत्ता पक्ष, को प्रतिपक्ष भन्ने प्रष्ट हुँदैन । यहाँनेर ओली दल विभाजन सहजीकरण अध्यादेश फेरि ल्याउने जुन कुरा गरिंदैछ, त्यसो हुन असम्भव हो । किनकी अदालतले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बस्नु पर्ने परमादेश गरिसकेको छ । संसद क्रियाशील भएको अवस्थामा अध्यादेश आउन सक्दैन । जबरजस्त अध्यादेश ल्याइएमा त्यो केही दिनमै खारेज हुने छ । त्यसअनुरुप भएका कार्यहरू स्वतः अवैधानिक हुनेछन् । तसर्थ ओली समूहले ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउन पर्ने विद्यमान कानुन कै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो अब ओली समूहका लागि सहज हुने छैन । यदि यो मापदण्ड पुरा गर्न नसके ओलीतन्त्रको पतन सोचेभन्दा पनि धेरै दुर्दान्त हुनेछ ।
दोस्रो प्रश्न पुनःस्थापित संसदले कस्तो गठबन्धन बनाउला र नयाँ सरकार गठन गर्ला भन्ने हो । यसका लागि पनि नेकपा विभाजनको वैधानिकता पुरा नभईकन गणित प्रष्ट हुँदैन । तर, राजनीतिक आधारमा भन्दा ओलीतन्त्रका विरुद्धमा रहेका दलहरूको साझा सरकार बान्छित देखिन्छ ।
यो सवालमा दुईवटा अप्ठ्यारो आउन सक्दछन् । पहिलो– ओली समूहले ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याएर वैधानिक दल बन्न सकेन भने नेकपा अविभाजित रहन्छ । यस्तो बेला नेकपासँग एकल बहुमत हुन्छ । कुनै पार्टीसंग एकल बहुमत हुँदाहुँदै लोकतन्त्रमा गठबन्धन सरकारको अपेक्षा गर्नु नैतिक हैन । यस्तो बेला नेकपा कै सरकार बन्न वाञ्छित हुन्छ ।
बाँकी दलहरू खुशीले विपक्षमा बस्न राजी हुनु पर्दछ ।
दोस्रो– विभाजनपछि संसदभित्र पहिलो ठूलो दल बन्ने नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) बन्ने पक्कापक्की जस्तो छ । यस्तो बेला उनीहरूमा फेरि अर्को प्रकारको घमण्ड, अहंकार बढ्न सक्दछ । केही साना वा सरकार चलाउन पुग्ने बहुमतको मात्र गठबन्धन बनाउने प्रयास हुन सक्दछ । त्यो बाटो देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागिद उचित हुँदैन ।
किनकी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित र नयाँ सरकार गठन हुनु मात्र अहिलेका लागि पर्याप्त छैन । देशका आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक र सामाजिक जटिलताहरू यस बीचमा नाजुक भएका छन् । ओलीतन्त्रले देशलाई चौतर्फीरुपमा बर्बाद गरेको र थङ्थिलो बनाएको छ । कुनै एउटा पार्टीको एकाङ्की सरकारले मात्र यो अवस्थाबाट देशलाई सहीसलामत समेट्न सक्ने स्थिति छैन । तसर्थ आगामी चुनावसम्म ओली समूह बाहेकको सबै दलको संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बढी उपयोगी हुन सक्दछ ।
आजको तेस्रो समस्या नेतृत्व संकटको हो । ओलीतन्त्रको उदय हुनुको धेरै कारणमध्ये एक समकालीन पुस्तामा विश्वासनीय नेतृत्वको अभाव हुनु पनि थियो । ओलीको विकल्पमा देउवा वा प्रचण्डलाई जनताले खासै रुचाएको तथा भित्रदेखि मन पराएको देखिन्न । ओली फालेर देउवा वा प्रचण्डलाई ल्याउँदैमा के नै होला र ? यस्तो मनोविज्ञान जनतामा गढेर बसेको छ ।
यो मनोविज्ञानबाट सृश्रित समस्यालाई व्यवहारबाट आश्वस्त पर्न जरुरी छ । यो मनोविज्ञान चमत्कारिक ढंगले सम्बोधित हुन सक्ने छैन । नेताहरूले आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा सुधार गर्नु र नयाँ सरकारमार्फत राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अधिकतम् डेलिभरीको प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भविष्य मार्गदर्शनको अर्को पाटो भनेको संविधान जारी गर्दा बखतका केही प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्नु हो । यसका लागि प्रचण्ड–माधव नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपाको गठबन्धन पर्याप्त हुन सक्दछ । ओलीतन्त्र पराजित हुनुको अर्थ केवल व्यक्ति ओली सत्ताबाट हट्नु मात्र हैन । ओलीतन्त्रका कारण स्थापित हुन नपाएका वा कमजोररुपमा स्थापित भएका कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरूको सुधार पनि हो ।
जसपाले चाहेजस्तो संवैधानिक सुधार गर्न नेकपा र कांग्रेस तत्काल सहमत होलान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ भने अझै छैन । तथापि ‘असल मनसायको संकेत’ का रुपमा संघीयता, वित्तिय संघीयता, समावेशिता, आरक्षण, सामाजिक न्याय, लैङिक समानता, प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापन, नागरिकतालगायत केही यस्ता बिषयमा संवैधानिक सुधार हुन सक्नेछन् । यदि यो नहुने हो भने ओली गएर पनि ओलीतन्त्र कायमै रहे सरह हुनेछ ।
अर्को कुरा– ओली सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक नियुक्तिहरूको खारेजी पनि हो । यो कुरा झट्ट हेर्दा सानो जस्तो लागे पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्ने खालको हैन । बिशेषतः यसबीच संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू आपत्तिजनक छन् । ती तुरुन्तै खारेज हुनु पर्दछ । साथै यसबीच चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छानबिन र कार्वाही हुन सक्ने गरी संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र प्रभावकारितामा जोड दिइनु पर्दछ ।
अन्तिम प्रश्न– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका यस बीचका कदम र महाअभियोग अभियोजनको सवाल हो । यसमा उदारता अपनाउनु हुँदैन । भण्डारीले जुनस्तरमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता, मर्यादा र सीमा खण्डित गरेकी छन्, यसका बाबजुद उनलाई छुट दिने हो भने त्यो अर्को गल्ती हुने भावी राष्ट्रपतिलाई मार्गदर्शन गर्न र पाठ सिकाउनका लागि भए पनि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग अभियोजन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ताकी भविष्यमा यस्तो गल्ती कसैले नगरोस् ।
समग्रमा यी सबै राजनीतिक महत्वका प्रक्रिया हुन् । कोभिड–१९ पछि शिथिल मात्र हैन, सखापजस्तो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, जनताको जीवनमा नयाँ आशा भर्न विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रश्न बाँकी नै छ । यदि यस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसक्ने हो भने जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेजस्तो हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बस्दै, यस्ता छन् एजेन्डा
संसद् अधिवेशन स्थगन गरिएकोप्रति कांग्रेसको आपत्ति, जनसरोकारका विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको निष्कर्ष
यस्तो छ ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनितिक प्रतिवेदन (पुर्णपाठसहित)
जुनसुकैपनि बेला निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन सक्छ, तयार भएर बस्नु – प्रम ओली
गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन वैशाख १३ गतेका लागि आह्वान
पहिला भारतको विरोध गर्दै हिँड्ने ओली अहिले भारतकै टाङमुनि छिरे : देउवा
माधव नेपालसहित ८ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा एमालेको निर्णय
Uncategorized, मुख्य समाचार, राजनीति
‘घरभित्र समर्थन नपाएपछि केपी ओलीले घरै भत्काउने काम गरिरहेका छन्’
देउवाले भने – बहुमतको सरकारसँग निहुँ खोज्दैनौँ, प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित छैनौँ
आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाउने, ४ बजे सपथ
‘ओली सरकारले राजनैतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट सरकारमा रहिरहने वैधानिकता गुमाइसक्यो’
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्यपछि माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज
एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आज बस्दै
अष्ट्रेलियामा बन्यो बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च
आधिकारिकता माग्दै निर्वाचन आयोग पुगेको नेपाल-खनाल समूहको पत्रमा के छ ?
ओली र विप्लवबीच भेटघाट, यथाशीघ्र बन्दी रिहाइ गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ
सकियो धरहरा पुनःनिर्माण, अवलोकनका लागि धेरै समय पर्खन नपर्ने
काठमाडौं, ६ वैशाख । धरहरा चढेर काठमाडौँ शहर नियाल्ने रहर पूरा गर्न नेपाली जनताले अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । अहिले ऐतिहासिक...
कुनै बेला मुम्बईका गल्लीमा कस्मेटिक सामान बेच्दै हिड्थे अरशद वारसी
काठमाडौं, ६ बैशाख । बलिउड अभिनेता अरशद वारसी ५३ वर्षका भ‍एका छन् । आज उनको जम्म दिन हो । सन् १९६८ को अप्रिल १९ तारिखमा वारसीको...
यी हुन् वैशाख महिनाभर विद्यालय बन्द हुने शहरहरु
काठमाडाैं, ६ वैशाख । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले एक महिनासम्म शहरका विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार ...
आजबाट दोस्रो चरणको खोप दिइँदै, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १९ भन्दा धेरै केन्द्रहरू
काठमाडाैं, ७ वैशाख । सरकारले आजदेखि नोबेल कोरोना भाइरसबिरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाउँदैछ । यसअघि पहिलो चरणको कोभिसिल्ड...
कीर्ते गरेर डाक्टर बन्ने ७ जना पक्राउ, नक्कली सर्टिफिकेट बनाइदिने व्यक्ति पनि समातिए
काठमाडौं, ६ वैशाख । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर चिकित्सक बनेको आशंकामा ७ जना डाक्टर पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय...
हवाई भाडा बढ्यो, कुन ठाउँकाे कति ?
काठमाडौं, ६ वैशाख । इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा पनि बढेको छ । वायुसेवा सञ्चालकले हवाई भाडा बढाउने निर्णय गरेको एक अधिकारीले...
फाइल फोटो काठमाडौं, ६ बैशाख । सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध तीन दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता...
आईसियू बेड र अक्सिजनको अभाव देखिएपछि दिल्लीका अस्पतालमा बेहाल
एजेन्सी, ६ बैशाख । पछिल्लो समय भारत कोरोना भाइरसको गम्भीर चपेटमा परेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २ लाख ७४ हजार नयाँ संक्रमित...